ChiGermany Zvimwe Zvinyorwa Zvidzidzo zveVideo
Muchidzidzo ichi, isu tiripano zvakare nemusoro wenyaya Wekuparadzanisa maAerb muchiGerman. Isu takafukidza nyaya yezviito zvinopatsanurwa muzvidzidzo zvedu zvekare uye iwe wakadzidza zvakakwana, ikozvino isu tichaenderera nemimwe mienzaniso nezviito zvatisina kumbotaura nezvazvo.
Tanga uye tevera vhidhiyo yedu chidzidzo.
Shamwari dzako dzinoda kudzidza chiGerman ChiGerman A1 yakagadzirirwa kugadzirisa kuwirirana kwemhuri shamwari dzako, kana uchida ChiGermany KPSS, KPDS, UDS Shamwari dzinogadzirira miedzo yakadai senyaya iyi inofanira kunge yakadzidza nzira yakanaka kwazvo.
Kudzidza ChiGerman Ichokwadi kuti izvo zvidzidzo zvidzidzo zvinodzidzwa kana kuchengetwa nepamusoro zvakanaka zvichaita kuti mauniti aonekwe mune ramangwana kuti adzidziswe munguva iri nyore uye shoma.
Kana iwe ukashanda muchiGerman seizvi, unogona kenchii chaiva ichi, kuti izvi zvakadururwa sei, sei zvisiri izvo zvinyorwa zvashandiswa, rudzi rwezvishongo zvataive tichiita izvi”Uye haufanirwe kudzokera kumashure.
Saka, apo uchidzidza chiJerman, iwe unofanira kuedza kudzidza zvidzidzo zvekutanga nenzira inogara.
Nyaya yeshoko inogona kuparadzaniswa inokosha zvikuru sezvo inonyanya kukosha muongororo.
Kana iwe uine humwe humwe hufumi, tapota usanonoka kunyora mundima yemazasi iri pasi apa.
Nhamba dzeGerman Vhidhiyo Chidzidzo, Die Zahlen Nhamba muGerman…
ChiGerman Chirafu, ChiGermany Tsamba Vhidhiyo Chidzidzo
ChiGerman Chizhinji, Zvizhinji Zvikamu Vhidhiyo Kudzidziswa
Zvisiri-zvechiGermany Zviratidzo uye Mienzaniso yekutumwa
German Wer Ist Das, Ndiani uyu? Video Course
ChiGerman Chirevo, Chimiro uye Chinhu Chinokurudzira
Mazuva eGerman, Mwedzi yeGerman uye Mwaka weGerman…
German Dein Mein Possessive Anoparidza Chidzidzo cheVhidhiyo
Nyika dzeGermany, Mitauro uye Mapfupa
German sollen Modal Zvechokwadi A1 Exam Yokugadzirira Course
Matauriro eMawachi eGerman, Mienzaniso yeWachi dzeGerman (Vhidhiyo…